Lammii Beenyaa Kutataa Namaa!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLammii Beenyaa Kutataa Namaa!!
Lammii Beenyaa Kutataa Namaa!!
By Kiya Segni
Lammiin namoota mootummaa biltsiginnaaf mataa dhukkubbii ta’an keessaa tokko, gama miidiyaa kana dhufuu hin jaallatu. Waa ijaaruu hin galchu, wanna jiru walitti hidhuu fi hojechiisuu irratti kennaa addaa qaba.
Bara Wayyaanee Mana hidhaatti waggaa heedduu dararame, ammas deebi’ee mana hidhaatti deebi’e. Gaafa mana hidhaa tures wanna hedduu galmeessaa nama ture. Akkuma beekamu erga mana hidhaatii ba’ee bifa kitaabaatiin jaallan achi keessatti du’an seenaa jireenya isaanii waliin barressee nuuf maxxansee ture.
Lammiin utuu hin hidhamiin guyyaa tokko dursee bilbilaan wal qunnamnee turre. Jaallan isaa hedduun gaafa hidhaman dursa gama miidiyaa utuu hin baasiin isatti bilbileen qulqulleefadha.
Gaafa dhumaa, akka dabareen isaa geesse waan beeke fakkata. Yoo walitti deebi’uu keenyaan dura dhufanii ana hidhaniif jedhe ergaa natti himate. “Hidhamneema qabsoo itti fufna isin bakkeedhaa itti cimsaa “ wanni inni naan jedhe sammuukoo kessatti hafe.
Lammiin akkuma maqaa isaa Ilma Lammiiti. Oromoon ijjoollee isaa dhugaaf qabsaa’an akka isaa kana bineensatti dhiisee hin taa’u.
Qabsoon keenya keenya galma isaa utuu hin ga’iin hin dhaabbatu.